“Buur aanu bixinay ma jirto cid aanu ogolaanshiyo ku siinayna ma jirto dad aanu ku casuunay iyo”… wasiirka hawlaha guud | SDWO.COM & SomalilandNews.net
“Buur aanu bixinay ma jirto cid aanu ogolaanshiyo ku siinayna ma jirto dad aanu ku casuunay iyo”… wasiirka hawlaha guud
Published on August 8, 2018 by sdwo · No Comments
Hargaysa (SDWO): Maalmihii u danbeeyay ayaa dadweynuhu barha bulshadda ee Internet-ka waxay aad ugu hadal hayeen warar sheegaya in xukuumadda Somaliland ay ganacsato shisheeye ogolaanshiyo u siisay in buuro ay ka gurtaan Dhagax.
Hase yeeshee xukuumadda Somaliland ayaa beenisay warar sheegayay in Dhagaxa burro ku yaalla gobolka Saaxil laga iibiyay ganacsadaha carbeed ee Cumaani, isla markaana dibadda loo dhoofinayo.
Wasiirka hawlaha guud iyo guriyaynta Somaliland C/rashiid Xaaji Ducaale Qambi, ayaa sheegay in aanay jirin cid ay fasax u siiyeen in buuraha dalka ay Dhagaxaan ka gurtaan, wararkaasina aanay waxba ka jirin.
Inkastoo uu xusay in ganacsadaha carbeed ee Cumaani ay u ogolaadeen in uu Dhagaxaan uu doonayay Waddo in uu ku dhiso ka guran karro buuro ku yaalla gobolka Saaxil, balse Cumaani laftiisu uu arrinkaa ka noqday kadib markii Dhagaxaantu ay noqon waayeen kuwii uu doonayay.
“Buur aanu bixinay ma jirto. cid aanu ogolaanshiyo ku siinayna ma jirto. Wax buur ah oo aanu bixinay ama aanu dad siinay, mid aanu cid ku casuunay iyo mid aanu nin ku nidhi qaado, midnaba ma jirto. Buur aan anigu cid siiyayna ma jirto”ayuu yidhi wasiirk hawlaha guud oo u waray ERYAL TV.
Waxa kaloo uu sheegay in ay doonayaan in xeer cusub ay u sameeyaan buuraha, isagoo arrintaas ka hadlayayna waxa uu yidhi “In aanu buuraha xeer u samayno ayaanu ku tallo jirnaa, oo dib loo eego xeerka bixinta dhulka”.
Wasiir Qambi ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay in dadka goboladda dalka degan ay iska sheegtaan buuraha, isagoona xusay in dhulka iyo buurahaba ay dawladda dhexe masuul ka tahay.
Waxaanu yidhi “Buuraha reer Saaxil ma laha, reer Todheer-na ma laha, reer Sanaag-na ma laha, reer Sool-na ma laha, reer Maroodijeex-na ma laha, reer Awdal-na ma laha. Buuraha dawladda dhexe ayaa masuul ka ah”.